ka nanokatra izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Navoitra fa laharam-pahamehana ho an’ny fitondram-panjakana ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahantany noho izy mipaka mivantana amin’ny fitomboan’ny toekarena sy toe-piainanan’ny vahoaka. Tanjona ny hahatratra mpizahatany miisa eo amin’ny 800 000 isan-taona, izay hampitombo ny famoronana asa, ny vola miditra azo avy amin’ny fizahantany ary ny harin-karena faobe. Kendrena hampiditra vola hatrany amin’ny 1 miliara dolara ao anatin’ny kitapombolam-panjakana izany. Ny 2018 dia 290 000 no tonga nefa 500 000 no tanjona. Nasongadina ary fa manamarika ny fahavononan’ny fitondram-panjakana hisokatra amin’ireo mpampiasa vola ary hanome sehatra hifanakalozana sy hihaonan’ireo mpandray anjara ao anatin’ny sehatry ny fizahantany io hetsika io. Nanamafy ny filoham-pirenena fa efa misy ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana hanatsara ny tontolon’ny fandraharahana eto Madagasikara, ny fampiasam-bola ary ny fametrahana rafi-dalàna miorina amin’ny ady amin’ny kolikoly sy ny fanamorana ny fampandehanan-draharaha. Haharitra hatramin’ny 20 septambra ity Wave Madagascar andiany voalohany ity. Ny andro roa voalohany dia hiompana amin’ny famelabelaran-kevitra mikasika ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahantany sy fandraharahana ary ny roa andro farany kosa dia hiompana amin’ny fidinana ifotony ataon’ireo mpandray anjara mba hahafahan’izy ireo mijery mivantana ireo toerana hiantsoana ireo mpampiasa vola.